Hiofana momba ny serasera sy ny fampahalalam-baovao ireo mpiasan’ny Antenimierampirenena, manomboka rahampitso eny Tsimbazaza. Iarahana amin’ny Eisa izany ary hanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpiasa, araka ny nambaran’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Rakotomamonjy Jean-Max, omaly. Hiofana miaraka amin’izy ireo koa ny mpanao gazety sasany.
Tany Hyderabad, fanjakan’i Telangana Ravalomanana ny faran’ny herinandro teo. Nihaona amin’ireo mpandraharaha goavana any amin’io fanjakana any Inde io ny tenany. Efa lasa lavitra amin’ny fandraharahana sy ny teknolojia ny any an-toerana. Manana orinasa any koa, ohatra, ny Mercedes Benz sy ny Microsoft…
Hanolotra olona handrafitra ny Filankevitra ambony ho fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna (HCDDED) ny Holafitry ny mpanao gazety (OJM). Manoloana izany, efa misokatra ny fisoratana anarana sy ny fepetra ho an’ireo mpanao gazety liana hiditra amin’izany. Tsiahivina fa hifarana ny 19 febroary izao ny fandraisana ny antontan-taratasy etsy amin’ny Anta, Ambohidahy.